लुम्बिनी सभागृहको काम अन्तिम चरणमा - नेपालबहस
| १२:४१:४७ मा प्रकाशित
२१ वैशाख,रुपन्देही । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सभा तथा ध्यान गृह’ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विसं २०७६ असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको सभाहलको काम निर्धारित समयमा नसकिएपछि ठेक्काको अवधि थपिएको थियो । कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ भए पनि पहिलो चरणको काम थपिएको म्यादभित्रै करिब सकिएको कोषले बताएको छ ।
विसं २०७४ को बुद्ध जयन्ती मूल समारोह हावाहुरीका कारण बिथोलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र तीन हजार क्षमताको अस्थायी सभाहल र तीन वर्षभित्र पाँच हजार क्षमताको स्थायी सभाहल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशनानुसार कोषले तीन हजार क्षमताको अस्थायी सभाहल निर्माण गरी त्यसपछिका बुद्ध जयन्ती समारोहहरु आयोजना गर्दै आएको छ । सँगसँगै स्थायी सभाहल निर्माणको काम पनि शुरु भएको थियो । स्थायी सभाहलअन्तर्गत पहिलो चरणको काम करिब सकिन लागेको छ भने दोस्रो चरणको काम पनि शुरु भएको छ ।
पच्चीस सय ६२औँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा २०७५ साल वैशाख १८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सभाहलको शिलान्यास गरेकी थिइन् । सभाहलसहितका संरचनाहरु बनाउन अनक–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी सिद्धार्थनगरले रु ३१ करोड ७९ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । यहाँ सभाहल मात्रै ३८६।८८ वर्गमिटरको बन्दैछ । पहिलो चरणमा सभाहल, दुईवटा शौचालय र कन्ट्रोल रुम करिब सम्पन्न भएका छन् । हालसम्म सभाहलको भुइँ, छानो फल्स सिलिङ र अन्य फिनिसिङका काम सकिएका छन् । दोस्रो चरणअन्तर्गत साभहलको वरिपरि पार्टिसन गर्ने काम शुरु भएको छ ।
कार्यक्रम गर्ने सुविधा सम्पन्न हल नभएकै कारण यहाँ केन्द्रित अधिकांश कार्यक्रम लुम्बिनीबाहिर आयोजना हुने गर्छन् । सभाहल निर्माणपछि यो क्रम रोकिने भएकाले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्छ भन्छन्, लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठ । “सभाहल नभएकै कारण लुम्बिनीमा हुनुपर्ने ठूला ठूला गोष्ठी काठमाडौँमै आयोजना हुन्छन् । यहाँका स्थानीयवासीलाई जानकारीसमेत हुँदैन । तसर्थ सभाहल निर्माण हुनु यस क्षेत्रका लागि स्थानीयवासी र व्यवसायीका लागि पनि खुशीको कुरा हो”, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।
आकर्षक देखिने नौ करोडमा बनेको सभागृह अलपत्र ७ महिना पहिले
प्रहरीको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गरी वितरण ४८ मिनेट पहिले
द्रुतमार्गको दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माण सम्झौता ५० मिनेट पहिले
कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को अवस्थाबारे कार्यक्रम गर्दै ५४ मिनेट पहिले
कोरोना भाइरसबाट बाकेमा थप पाँच जनाको मृत्यु १२ घण्टा पहिले
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले पायाे ऋणपत्र निष्काशनकाे अनुमति ६ घण्टा पहिले
एनएमबि बैंकले २ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्दै, कति दिदैछ ब्याज ? ७ दिन पहिले
संक्रमित र तिनका परिवारलाई अपहेलना नगरौँ २ दिन पहिले
तीन कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार, कुनको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य कति ? ५ दिन पहिले
निषेधाज्ञामा चलाइएका सवारीको पास जाँच २ हप्ता पहिले
नेपाल देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठमा १ हप्ता पहिले
भूमध्य सागर पार गरेर १,२०० आप्रवासी इटाली पुगे ५ दिन पहिले
रुपन्देहीमा १६ गतेदेखि निषेध आदेश लगाइने ३ हप्ता पहिले
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाको शुभकामना १२ महिना पहिले
नेपाल तरुण दलले दियो कैदीलाई खसी ! उपहार ढाकाटोपी ७ महिना पहिले
समाजमा बलात्कारका घटना भयावह ५ महिना पहिले